ny Mampiaraka toerana sary
Te-hahafantatra izay afaka toy izany
Nanokatra mahaliana toerana izay misy olona afaka hahalala fotsiny, ary tsy misy ilaina ny teny.
Na iza na iza mijery sary vitsivitsy na ny lahatsary, dia ho afaka ny mahita ireo izay mahasarika azy, toy ny, ka jereo na ny fiaraha-miombom-po
Ny vohikala dia mampiseho hoe iza ianao tsara tarehy, ary izay tsy.
Fa tsy MISORATRA anarana, ary rehefa afaka izany, vao mamaly ny fanontaniana hoe:»Toy ny»raha toa ny lehilahy iray eo amin’ny sary na ‘tsy tia’ ny. Ny toerana dia tena maimaim-poana, ary toy izany tsotra amin’ny famolavolana.
Jerena an-jatony sary ianao dia tena hahita ny olona tsy toy ny na ny tsirony.
Tsy misy tiany no tsy hiady hevitra, fa mahazatra dia manomboka afa-tsy rehefa ny ankamaroan’ireo ny sary dia ifanarahana toy ny samy hafa. Ireto ny tombontsoa lehibe:
dia miatrika mivantana mahaliana sy mahafinaritra ho anareo, raha tsy misy ny fanontaniana.
ankizivavy mandrakizay dia ho voatsimbina amin’ny spam, ny vahiny ary ny an-jatony Intrusive tolo-kevitra ny hanao firaisana ara-nofo;
ny mombamomba ny hatsaran’ny zavatra tsy avy ao amin’ny ankavia, fomba fijery, mba hisorohana ny mason ny»adala»na»ny olon-dehibe dadatoa»;
ry zalahy ihany ny farany dia ho afaka ny mahita ireo tovovavy izay manao izany dia»nahantona»ary hitsahatra ny mifikitra sy hifikitra rehetra tsy an-kanavaka ny ankizivavy;
Toy ny fanao dia mampiseho sy ny antontan’isa mifanaraka mba samy hafa tsy hoe. Aoka ny olona mihevitra fa izy no tena mahasarika sy ny cutest, saingy mety haka bebe kokoa noho ny isan-kerinandro mba ifanarahana olona toy izany.
Tena sarotiny ny antsasaky ny olombelona, mba hanairana ny rehetra, dia ny tovovavy, izay, hafahafa ampy, tsy toy ny endriky ny hatramin’ny — n’ny ry zalahy eo amin’ny toerana. Fa ny olona mba tsy ho diso fanantenana ianao, toy ny ankizivavy iray, fara fahakeliny dia tena azo atao.
Raha toa ianao ifanarahana ao amin’ny tranonkala ny olona iray dia toy ny dia ho afaka mifanaraka izany varavarankely, manokana amin’ny chat.
Rehefa avy niresaka, farany, manapa-kevitra ny hihaona, ary tena fantatro.
Ny mpamorona ny tsy manam-paharoa loharano manome antoka anareo tamin’ny fivoriana voalohany fa ianareo dia raiki-pitia efa tao amin’ny fahitana voalohany
← Amin'ny chat roulette amin'ny ankizivavy
Ny lahatsary amin'ny Chat miaraka amin'ny rosiana ny ankizivavy →